လိုအပ်သော Speed ​​™ No Limits APK Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ™ဘယ်သူမျှမကန့်သတ်ချက်များမြန်နှုန်းဘို့လိုအပ်ပါတယ်
™ဘယ်သူမျှမကန့်သတ်ချက်များ APK ကိုမြန်နှုန်းအဘို့လိုအပ်ပါတယ်
သင်ရုံမိုဘိုင်းအတွက်လုပ်မြန်နှုန်းများအတွက်လိုအပ်နေသောူပည်သူ၏ပထမဦးဆုံးအဖြူ-လက်ခေါက်ဆစ် edition အတွက်ကြီးစိုးများအတွက် Race အဖြစ်မြေအောက်ရှင်ဘုရင်အဖြစ်ပန်းဦးရစ်သရဖူကိုတောင်းဆို - သင်ရီးရဲလ်ပြိုင်ပွဲ3ဆောင်ခဲ့သောဂိမ်း developer ကနေ။
ကားများနှင့်ဖောက်သည်များ၏တစ်ဦးမယုံနိုင်စရာအကွာအဝေးနှင့်သင်၏စတိုင်ကိုပြသသောစီးနင်း Build ။ သငျသညျမြေအောက်လမ်းပြိုင်ကားထဲသို့နင်းနဲ့လိပ် hit အဖြစ်ပရမ်းပတာနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအကြားကိုယ့်ကိုယ်စတင်ရန်။ အရေးယူခြင်းယှဉ်ပြိုင်, သင်တို့၏ကိုယ်စားလှယ်တက်ပြီးနောက်နောက်ထပ်လူမျိုး, ပိုမိုစိတ်ကြိုက်နှင့်ထို့ထက် ပို. ကားများသို့ကန်။ သင်၏ရွေးချယ်မှု Make နှင့်ဘယ်တော့မှပြန်ကြည့်ပါ။
ဒီ app app ကိုဝယ်ယူပေးထားပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ device ကို setting များကို အသုံးပြု. app ကိုဝယ်ယူ disable ဖြစ်နိုင်တယ်။
Extreme စီး customize
သငျသညျထိုကဲ့သို့သော Ferrari ပြိုင်ကား, Lamborghini က, McLaren, Pagani, Koenigsegg, Hennessey နှင့်ထို့ထက် ပို. အဖြစ်ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူများထံမှအမြဲလိုချင်တော့အစစ်အမှန်ကမ္ဘာကားများနှင့်အတူသင့်ရဲ့ကားဂိုဒေါင် Stock ။ ထိုအခါသင်နှင့်အတူကစားရန်သန်း 2.5 ကျော်ထုံးစံ combo ပေးခြင်း, အ Mod ဆိုင်နှင့်က Black Market ကကဲ့သို့အစက်အပြောက်ကနေ, မိုဘိုင်းပေါ်တွင်အပူဆုံးစိတ်ကြိုက် system ကိုသူတို့နှင့်အတူထွက်လှည့်စား။ သင့်ရဲ့စီးစောင့်ဆိုင်းနေကြသည် - ယှဉ်ပြိုင်နှင့်အတူဦးခေါင်း-to-ခေါင်းကိုသွားနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသက်သေပြရန်အတွက်လမ်းများမှသူတို့ကိုယူပါ။
Fast Drive - AND မကြောက်တရား
, Blackridge ၏လမ်းများပေါ်သို့ခုတ်မောင်းခုန်ကျော်အရှိန်အဟုန်မြှင့်ခြင်းနှင့်အပျက်အစီးအစအနပတ်လည်အသွားအလာသို့မြို့ရိုးတဘက်နှင့်မြန်နှုန်းမြင့် Nitro ဇုန်မှတဆင့်။ အဆိုပါနိုက်ထရပ်အပေါ် Flip နှင့် adrenaline လောင်စာမောင်းနှင်ခြင်းနှင့်မျော၏အခြားအဆင့်သို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိုး။ တိုင်းထောင့်ပတ်လည်မှာသငျသညျဒေသဆိုင်ရာကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းများအားနှင့်ဒေသခံရဲများကနှင့်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားအဖြစ်လတ်ဆတ်သောအပြေးပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ wannabe drivers တွေကိုအပြည့်အဝမယ့်ကမ္ဘာကြီးရဲ့ - သငျရှေ့နေနှင့်လေးစားမှုဝင်ငွေနိုင်မလဲ?
သငျသညျ, ပေါ်တွင်သင်ယူ gapped သူတို့ကိုစွန့်ခွာ, သင်၏ကိုယ်စားလှယ်တိုးမြှင့်ဖို့လုံလောက်တဲ့အရူးမည်သူမဆို Race အဖြစ်ချ back ဘယ်တော့မှမ။ တူး, ပျံ့, ဆွဲ, သင်၏အမြီးအပေါ်ရဲ outrunning နေစဉ် finish ကိုလိုင်းရန်သင့်စီးနင်းလှိမ့်။ 1,000 ကျော်စိန်ခေါ်လူမျိုးအတွက်ရော်ဘာ Burn - နှင့်ရုံစတင်လိုင်းပါပဲ။ , နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြား Be လမ်းများပိုင်ဆိုင်နှင့်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကားတွေဂိုးသွင်း။ တဦးတည်းစီးနင်းအလုံအလောက်ဘယ်တော့မှသောကွောငျ့,
30 ရက်ပေါင်း '' အသိပေးစာ www.ea.com/1/service-updates အပေါ် posted ပြီးနောက် EA ၏အွန်လိုင်း features တွေနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအနားယူစေခြင်းငှါ
ဒီ app: တစ် persistent အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု (ကွန်ယက်ကိုအခကြေးငွေလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်) လိုအပ်ပါတယ်; EA ရဲ့ Privacy & Cookie ပေါ်လစီများနှင့်အသုံးပြုသူသဘောတူညီချက်များ၏လက်ခံမှုလိုအပ်သည်။ In-ဂိမ်းကြော်ငြာလည်းပါဝင်သည်; (အသေးစိတ်ကိုသီးသန့်လုံခြုံရေး & Cookie ပေါ်လစီကိုကြည့်ပါ) တတိယပါတီ analytics နည်းပညာမှတဆင့်ဒေတာစုဆောင်း; 13 ကျော်တစ်ဦးပရိသတ်အတွက်ရည်ရွယ်သည်အင်တာနက်နှင့်လူမှုကွန်ယက်ဆိုဒ်များတိုက်ရိုက်လင့်ခ်များပါရှိသည်။
နှစ်ဦးကအနီပူ Ferrari ကုမ္ပဏီဟာ 488 Pista နှင့် F355 Berlinetta နှင့်အတူ Blackridge သို့တော! ဘယ်မှာသင်လုပ်နိုင်သည်ဒီမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် update ကိုအတွက်ယှဉ်ပြိုင်လွှမ်းမိုး:
•တစ်ဦးရှင်သန်မှု-of-the-အမြန်ဆုံးဖျက်သိမ်းရေးပြိုင်ပွဲအဆိုပါပြင်းထန်သော Blackridge Royale အထူးအဖြစ်အပျက်နှင့်အတူရပ်နေသည်ကိုပြီးခဲ့သည့်ယာဉ်မောင်း Be
•အနေနဲ့အားလုံးအသစ်က Proving Grounds သို့စိန်ခေါ်မှုအတွက် Ferrari ပြိုင်ကား F355 Berlinetta ရယူနိုင်သော
•အလမ်းများအုပ်ချုပ်နှစ်ယောက်အမှတ်တံဆိပ်-လေဆိပ်သစ်-အာရုံစူးစိုက်မြေအောက်ထဲမှာလတ်ဆတ်တဲ့လိုင်စင်ပြားဝင်ငွေဖြစ်ရပ်များအပြိုင် - Jetstream နှင့်အနီရောင်မျက်လုံး
61.54 ကို MB
CSR ပြိုင်ပွဲ 2